Ny voninkazo tena izy dia noterena hamorona endrika tsy manam-paharoa amin'ny tranga finday | Famoronana an-tserasera
Ya Amin'ny lohataona isika Ary ny telefaona finday dia iray amin'ireo fitaovana ampiasainay manokana amin'ny fomba manokana noho ireo fonosana ireo izay afaka mamadika tranga volondavenona sy metaly kely somary malahelo ho lasa lafatra mety tsara ho an'ny tantara an-tsary na ny fonon'ny iray amin'ireo sarimihetsika ankafizinay.
Ity dia bebe kokoa na ny hevitra momba ny HouseOfBlings sy ireo tranga findainy izay mety hahitana azy ireo tena voninkazo hanomezana ny firariana fandraisana tsara amin'ny lohataona. Fomba manokana hahatongavana amin'izao andro voalohany izao ho antsika izay miandry ny masoandro sy ny lanitra manga misokatra.
Toa tsy mampino fa ny finday avo lenta finday dia manana fahaiza-manao marobe ho an'ny fanaingoana hahafahana mampiasa ireo fonony maro karazana. Misy fivarotana maro manokana tsy misy afa-tsy ny fonony amin'ny karazana loko, endrika ary endrika rehetra. Iza no azontsika atao manatevin-daharana ireo noforonin'ny HouseOfBlings miaraka amin'ny loko rehetra izay nindramin'ny voninkazo tena izy toa ireo izay mijanona ao anaty boky rehefa namaky tao amin'ny valan-javaboary na teny an-tendrombohitra izahay.
Ny hevitra an'ity trano ity dia saika hisambotra lohataona miaraka a voninkazo voatetika amin'ny fomba izay hanomezana teboka tena miavaka amin'ny findainao. Karazan-javamaniry sy loko isan-karazany hanisy tombo-kase an'io miverina amin'ny HouseOfBlings.
Ity trano fonony ity dia manana ny Etsy anao, izay ahafahanao mividy fonony isaky ny € 17,43 €. Misy karazana loko sy pirinty isan-karazany hanampiana endrika 14 hafa, noho izany dia hitady tranga manokana ho an'ny maodelin'ny telefaoninao.
Una fomba samihafa amin'ny famihina lohataona toy ny fotoana izay, ankoatry ny fanovana akanjo, dia ny idealy hanovana ny tranga ary na ny birao telefaona aza mba hiarahan'ny zava-drehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Tranga finday namboarina niaraka tamin'ny voninkazo tena izy mba hitsena ny lohataona